Samsung ayaa ku dhawaaqday Galaxy Tab S6 Lite cusub boggeeda | Androidsis
Ilaa maantadan la joogo, ka dib diidmada qayaxan ee dowladda Mareykanka ee Huawei, soo saaraha kaliya ee bixiya kiniinno ay maamusho Android oo leh a tayada cajiibka ah waa Samsung. Si kastaba ha noqotee, soo bandhigida iyo istaraatiijiyada qaabeynta ee nooca noocan ah waa isku mid ama xitaa ka dhib badan tan khadka casriga ah.
Ilaa maanta, waxaan haysannaa hal dhinac oo ah Galaxy Tab S6 Waa qaabka ugu awoodda badan qaybta kiniinnada Samsung, oo ay ku xigto Galaxy Tab S5e. Galaxy Tab S6 Lite cusub ayaa kala badh u dhexeeya labadaSi ka duwan S5e, ma siiso taageero buuxda S-Pen, S-Pen kaas oo ku jira sanduuqa ka duwan iPad-ka.
S-Pen waxaa lagu soo daray sanduuqa Galaxy Tab S6 Lite, waxay umuuqataa taas kuma jiraan batteriga, sidaa darteed waxaan hilmaami karnaa inaan sameyno tilmaamo shaashadda ah oo aan u adeegsanno shaqooyin kale oo wireless ah oo laga heli karo labada Tab S6 iyo Xusuusta 10. S-Pen-kan wuxuu la mid yahay midka aan ka heli karno Galaxy Note 10 Lite.
Sidii la filayay, oo ah qaab liita oo ka hooseeya Tab S6, RAM, keydinta iyo kamaradaha ayaa liita. Shaashadda AMOLED ee Tab S6 waxaa lagu beddelay LCD. Sidaan aragno, qiimayaashu way yareeyeen meel kasta si ay isugu dayaan inay u soo bandhigaan badeecad wanaagsan, qurux iyo jaban
Gacaliye Lama yaqaan 8-core 1.7 GHz
Kaydinta 64/128 GB lagu ballaarin karo kaararka microSD
Screen 10.4 inch oo leh 2000 × 1200 xallinta LCD
S-Pen Haa waxaa lagu daray sanduuqa
Cámara trasera 8 mpx - 1080p oo ah 30 fps
Kaamirada hore 5 mpx
Xuduudaha kala duwan USB-C - Isku xirka dhagaha - WiFi 5 - Bluetooth 5.0
Nooca Android Android 10 oo leh One UI 2.1
Cabbirada 244.5 × 154.3 × 7 cm
Peso Gram 467
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee Galaxy Tab S6 Lite waa inuu ka yimaado warshadda Android 10 oo ay weheliso lakabka hal-abuurka One UI 2.1, markaa ku raaxayso dhammaan wararka ka yimid cusbooneysiintan labaad ee nooca labaad ee One UI 2.0.
Nasiib darrose, lama daabicin waa maxay qiimaha bilowga ama helitaanka, sidaa darteed waa inaan sugnaa dhowr maalmood macluumaadka hadda laga heli karo Samsung Indonesia si looga helo adduunka oo dhan ama ugu yaraan waddamada waaweyn ee shirkadda Kuuriya ay qorsheyneyso inay suuqgeyso qaabkan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung waxay ku dhawaaqeysaa Galaxy Tab S6 Lite cusub boggeeda internetka
The OnePlus 8 Pro wuxuu ka badbaadaa JerryRigEverything tijaabooyinkeeda adkeysiga adag